२१.५१ अंकले घट्यो बजार, ४ अर्बभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री | आर्थिक अभियान
२१.५१ अंकले घट्यो बजार, ४ अर्बभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री
मंसिर १३, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोवार दिन सोमवार पनि नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा २१ दशमलव ५१ अंकले घटेको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक घटेर २ हजार ६२९ दशमलव ९७ विन्दुमा आइपुगेको छ ।यो दिन कारोवारमा आएका २२८ ओटा धितोपत्रको ८२ लाख २५ हजार ८२२ कित्ता शेयर रू. ४ अर्ब ८९ लाख ३७ हजार १३३ मा खरीदविक्री भएको छ । कारोबारमा आएका ती धितोपत्रमध्ये दुई ओटा धितोपत्रको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
न्यादी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशत र सामलिङ्ग पावर कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९८ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
न्यादी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ३१० दशमलव ५० र सामलिङ्ग पावरको शेयर मूल्य रू. ३८१ दशमलव ४० पुगेको छ ।
त्यसैगरी सोमवार आइसीएफसी फाइनान्सको कम्पनीको शेयरमूल्यमा भने नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यो दिन १० प्रतिशतले घटेसँगै नकारात्मक सर्किट लागेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ८३८ दशमलव ८० मा झरेको छ । कम्पनीको शेयरमा क्रेताभन्दा विक्री धेरै भएकाले शेयरमूल्य घटेको हो ।
दोस्रोमा चन्दागिरी हिल्स लिमिटेडको शेयरमूल्य ५ दशमलव २० प्रतिशत घटेर रू. १ हजार ४२२ मा झरेको छ । सोमवार सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री भने महालक्ष्मी विकास बैंकको भएको छ । कम्पनीको रू. ६१ करोड ४ लाख ७५ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६१९ दशमलव ४० कायम भएको छ । कम्पनीले आकर्षक लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री भएको हो ।
कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनको लागि वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी दोस्रोमा नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको रू. १५ करोड १२ लाख ३ हजार बरावरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । यो दिन कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहमध्ये हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत र म्युचुअल फण्ड समूहको परिसूचक शून्य दशमलव १२ प्रतिशत बढेको छ भने बाँकी समूहको परिसुचक घटेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक घटेको छ ।
सबैभन्दा बढी होटल एण्ड टुरिजम समूहको परिसूचक २ दशमलव २५ प्रतिशत घटेको छ । त्यसैगरी बैंकिङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत, व्यापार समूहको परिसूचक शून्य दशमलव २१ प्रतिशत,विकास बैंक समूहको परिसुचक १ दशमलव ३६ प्रतिशत,वित्त समूहको १ दशमलव ३१ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समूहको परिसुचक शून्य दशमलव ६५ प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत,अन्य समूहको १ दशमलव ९७ प्रतिशत,लघुवित्त समूहको शून्य दशमलव ८ प्रतिशत,जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ८३ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतले घटेको छ ।
आइतवार पनि बजार ८० अंकले घटेको थियो । सोमवार बजार खुलेको आधा घण्टासम्म भने बजार २७ अंकसम्म बढेको थियो । तर विस्तारै विक्रेता हावी हुँदा बजार घट्न गएको हो । आइतवारको तुलनामा भने सोमवार पेनिक सेलर कम भएको देखिन्छ ।
सोही कारणले पनि आइतवारको तुलनामा सोमवार बजार कम अंक घटेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । बजार घट्दा नयाँ र साना लगानीकर्ताहरु बढी पेनिक हुने र विक्री चाप बढ्ने गर्दछ ।